Fotoana fanomanana Taom-baovao Sinoa 2021
Ny fialantsasatry ny taom-baovao sinoa 2021 dia ny 12 febroary ka hatramin'ny 26 feb. Satria fetim-pirenena io dia misy fiantraikany amin'ny famokarana rehetra any Shina. Ankoatr'izay, satria mbola betsaka ny tsy fahazoana antoka amin'ny areti-mifindra coronavirus manerantany, ary avy amin'ny zavatra niainantsika nandritra ny taona vaovao holi ...
Fampiratiana Electronica South China any Shenzhen
Electronica, iray amin'ireo fampirantiana voalohany amin'ny indostrian'ny fitaovana elektronika, manokatra ny hetsika voalohany any Chine atsimo. Ny fampirantiana mandritra ny 3 andro dia manomboka amin'ny 3 Novambra 2020 ao amin'ny Centre International Conventional Center vaovao. Ny exhibitio ...
Fetin'ny Fahavaratra Sinoa sy Fetim-pirenena
Amin'ity taona ity dia atao mandritra ny herinandro iny ihany ny fetibe afovoan'ny fararano sinoa sy ny fetim-pirenena; 1 - 7 Oktobra. Koa satria mety hisy fiantraikany amin'ny famokarana any Shina amin'ny ambaratonga samihafa ireo fialantsasatra ireo, dia manomana drafitra hetsika miaraka aminao foana izahay hahita fomba samihafa hisorohana ...
Pandawill Circuits ao amin'ny ExpoElectronica
Pandawill Circuits, mpamatsy PCB & PCBA matihanina avy any Shenzhen China dia hanolotra ny teknolojia PCB sy ny serivisy fivoriambe PCB amin'ny fampisehoana elektronika lehibe indrindra Expoelectronica any Russia. Tongava mitsena an'i Stephen avy any amin'ny Pandawill Circuits ao amin'ny A284 hiresaka momba ny PCB Manufacturing and Ass ...
PCB Layout Service Misy
tamin'ny admin tamin'ny 19-02-01
Ho an'ireo mpanjifantsika sandany, ny layout PCB sy ny serivisy famolavolana dia iray amin'ireo fomba hanampiantsika ny mpanjifantsika handeha haingana kokoa amin'ny tsena satria ny ekipanay injeniera dia manana traikefa tena manan-danja amin'ny famolavolana PCB ho an'ny fahombiazana sy ny fahaizan'ny mpamokatra. Ny ekipanay injeniera sy mpandraharaha CAD / CAM dia misy t ...
Taom-baovao Sinoa 2019, Taon-kisoa
avy amin'ny admin tamin'ny 19-01-01
Andro fialantsasatry ny taom-baovao sinoa Ny fialantsasatry ny taom-baovao sinoa ho an'ny daholobe dia 4 febroary hatramin'ny 10 feb. Ny Taom-baovao Sinoa no fialantsasatra nentim-paharazana manan-danja indrindra any Shina. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Fetiben'ny Lohataona. Ny fankalazana ny taom-baovao sinoa dia natomboka tamin'ny taom-baovao sinoa ...